Yega-yekuisira spidhi yefriji, China Kuzvidzora inonama firiji Mahofisi, Vatengesi, Fekitori - Square Technology Boka Co, Ltd.
Imba>PRODUCTS>Kuzvicheka-wega Spiral Freezer
Yega-yekuisira spiral firiji inoenderana uye ine hutano firiji dhizaini. Zvichienzaniswa neyechinyakare kudzvinyirira kwekunonoka furiza, iyo yekuzvitutumadza yemhepo furiza inobvisa njanji dzinotsigira bhanhire, izvo zvinoreva kusvika pamakumi mashanu emakumi mashanu echando echando neakadaro tsoka kudhinda. Iwo anotakurisa angangoita 50% asvike pakuchenesa nekutenda kubviswa kwetirivhi yebhandi nedhiramu. Iyo firiji yabatanidza iyo-ye-iyo-iyo-yakachena-in-nzvimbo (CIP) system. Dhizaini yakavhurika, isinganetsi kuchenesa uye inokwanisika inogadziridza zviyero zvehutsanana uye inoderedza nguva yekutsvaira nekugadzirisa. Iyi ficha inoderedza kusvibiswa uye inowedzera hupenyu hwechishandiso nekudzivirira marara anovaka uye kurerutsa nzira yekuchenesa. Mapaipi ese ane mhango uye machubhu akabviswa pazvinhu zvakaumbwa, uye nzvimbo dzakatwasuka dzakatsvedza. Iyo dhiraivha sisitimu inoshanda zvachose pakutenderedza kukwesana saka kudzoreka kushoma kunodikanwa kupfuura echinyakare kukakavara kwemhepo mafiriji.
● Iyo yakasarudzika bhanhire dhizaini ine chigadzirwa mune yega-ine inotonhora nzvimbo, kune yakapfava, yunifomu kubata uye nepamusoro hutsanana.
● Iyo yekumira yemhepo yekukwira velocity inobata chigadzirwa kuburikidza nemastacks ese, ichipa kunyange, nekukurumidza, inoshanda inotonhora mhedzisiro.
● Iyo yekuzvicheka-spiral spiral inopa yakatsetseka, yakavimbika, jam-isina mashandiro.
● Kwete yeKisimusi-miti, kuwedzeredza, 'kubhenekera' bhanhire kana girisi yekushandisa.
● Iyo yekuzvimiririra-yekumonera yemhepo inoshambadzira inogona kudzikisa bhanhire kusagadzikana. Yakaderedza saizi remota, isina lubricant shoma, hapana bhanhire rinotsvedza kana kupfuura-kutambanudza.
● Feni inowana pane yakaoma evaporator.
● Inoderedza chando uye inowedzera kupisa kupisa, nguva yekuwedzera uye kugadzirwa.
● Mari yakaderera paundi pondo.
● Variable yekumhanyisa bhandi uye maitiro enongedzo nguva.
● Kureba kwenguva pakati pekukanganisa kwekusagadziriswa kwekugadziriswa.
● Imwe sosi inotungamira dhizaini nekuita.
● In-mutsetse nechando kuti kuramba kugadzirwa.
● Chaizvoizvo maitiro ekudzora.
● Kubudirira kukuru ne -40 F firiji tembiricha.
● CIP (yakachena-mu-nzvimbo), yakavhurika uye nehutsanana chimiro, zviri nyore kuchenesa.
Kuzvigadzirira wega firiji iri yakanaka kutonhora nyama mipira, nyama nuggets, zvakakangwa huku zvikamu, chikafu chakagadzirwa uye zvimwe zvekudya zvetsoka diki.